Veloma ny minisitry ny fizahantany tany Lesotho teo aloha
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Lesotho » Veloma ny minisitry ny fizahantany tany Lesotho teo aloha
Ny manan-kaja Mamahele Radebe, minisitry ny fizahan-tany taloha ho an'ny Lesotho dia nodimandry tamin'ny asabotsy 31 martsa 2018, rehefa narary ela.
Thato Mohasoa, izay sekretera lehibe an'ny Minisiteran'ny Tontolo iainana momba ny fizahantany sy ny kolontsaina, notarihin'Andriamatoa Minisitra Mamahele Radebe no nanoratra izany fanomezam-boninahitra izany tamin'ny fahaizany manokana.
Very izahay Honorable Mamahele Radebe tamin'ny sabotsy 31 martsa 2018, taorian'ny aretina lava. Efa malahelo ny fanatrehany tsara fanahy sy ny feony manome toky isika, ary raha hisafidy isika dia mbola hiaraka amintsika izy, salama tsara, eto an-tany.
Tamin'ny fiainany, ity zafikelin'ny Lethole of the Makhoakoa (rehefa niresaka tamim-pitiavana izy), dia nahita ny fizarana fahasahiranana, tolona, ​​tsy fahatokisana, tsy fahampian'ny zanany, ary famoizana vady tamina loza mahatsiravina ny fahafatesana. Nefa avy tamin'ireo toe-javatra ireo no nipoiran'ny fahatokisana tsy tapaka, tony ary tamim-pifaliana fa hitondra soa ny fiainana. Io no zava-nitranga niainany tamin'ny foto-pitsipika, fangoraham-po, pragmatisma ary fahombiazana matihanina lehibe.
Raha vantany vao nisotro ronono tamina asa fanompoana sivily malaza izy, amin'ny maha lohan'ny serivisy an'i Lesotho azy, dia nandray anjara mavitrika tamin'ny politikan'i Lesotho izy, nitodika nianavaratra nankany amin'ny faritra nahaterahany Hololo, hijoro amin'ny fifidianana ho kandidà amin'ny All Basotho Convention (ABC). Tonga tamin'ny 2012 ny fotoana naha Minisitry ny tontolo iainana fizahan-tany sy kolontsaina azy, taorian'ny niforonan'ny Governemanta Coalition voalohany an'i Lesotho. Io fahaiza-manao io no nahatonga antsika roa niara-niasa sy namatotra fifamatorana matanjaka nandritra ny androm-piainana.
Rehefa naneho izay tokony ho minisitra izy dia nasehony antsika koa ny atao hoe olombelona. Nitondra tena tamim-pahamendrehana izy, nifantoka tamin'ny hatsaram-panahy kely ary hatsikana tsy mety afa-po izay namaritra fiainana tsara koa. Ny fifandraisana eo amin'ny minisitra sy ny sekretera lehibe dia tsy mora tantana. Olona roa ireo, samy manana hery fatra mavesatra. Ny minisitra dia manana andraikitra hampihatra ny torolàlana amin'ny ankapobeny sy ny fifehezana ny minisitera, raha ny sekretera lehibe kosa dia omena fahefana manokana hanome ny fifehezana sy fitantanana ny loharano rehetra - ny olombelona sy ny renivohitra. Izy io dia afaka, efa ary mitohy mandraka ankehitriny, ho loharanom-piezahana lalina eo amin'ireo ivon-pahefana roa ireo. Tsy toerana ho an'ny mongers herinaratra jamba izany. Fifandraisana izay mitaky fifanajana, fifampitokisana, fiaraha-miasa ary fahalalam-pomba. Nanana ireo toetra rehetra ireo ny minisitra. Nanondro anay rehetra tao amin'ny minisitra izy, avy amiko ny tenany ho mpanolotsaina azy, ary ny mpiasa rehetra, ny mpiara-miasa aminy, ary nitondra anay toy izany. Saingy mihoatra lavitra noho izany izy; izy dia mpitarika, mpanolotsaina, reny ary namana. Betsaka ny zavatra nianarako avy taminy momba ny mekanikan'ny asam-panjakana, ary ny politikam-panjakana, ao anatin'izany ny fomba fitetezana ny birao misy ny governemanta hahavita asa, toy izay avy amin'ireo olona niara-niasa tamiko.
Ny Governemanta Coalition voalohany dia nanangana ny "Fihaonana an-tampon'ny asa", sehatra iray hanamafisan'ny governemanta ny famoronana asa sy ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola. Ny sehatry ny fizahantany dia voamarina ho iray amin'ireo andry lehibe ananan'ity hetaheta politika ity, ary notarihina izahay hanatanteraka izany. Ho valin'izay, ny minisitra dia nibolisatra tamin'ny fihazakazahana tamin'ny fandraisana andraikitra marobe, izay namboamboarina hametrahana ity sehatra ity. Tamin'ny farany, ankoatry ny zavatra hafa, tranom-panjakana maromaro, izay, hatramin'izao, natao ho elefanta fotsy, dia natsipy tany amin'ny sehatra tsy miankina, tamin'ny alàlan'ny fampivoarana ny fifanakalozana fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina, ka nitombo ny fampiasam-bola. , fitomboan'ny asa any Basotho, ary koa ny fiakaran'ny isan'ny mpizahatany tonga ao Lesotho.
Nisolo tena ny firenentsika tamim-pahamendrehana teo amin'ny sehatra manerantany ny minisitra ary nanorina fifandraisana misy ifandraisany sy mahasoa amin'ny lafiny iray. Ny sasany amintsika dia tsy afaka manadino ny hatsarany izay nitarika ny fanaovan-tsonia ny Memorandum of Understanding eo amin'ny minisiterantsika sy ny provans atsimo atsinanan'i Kwazulu-Natal sy ny Free-State, momba ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Tetikasa Cableway, atsinanana atsinanan'ny firenena. , manamorona ny Drakensberg. Nandritra ny fihaonantsika tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fizahantany afrikanina tatsimo dia nanamafy izy fa ny fahatanterahan'ny tetikasa, na dia hampiroborobo ny fizahan-tany sy hanamafisana ny varotra eo amin'ny firenena roa tonta aza, ”Manonona ny soratra mahomby an'ny Sehlaba-Thebe National Park, ho vakoka manerantany - asa mendri-kaja izay tohanan'i Afrika-Atsimo -, ho tranga iray hanohizan'ny fiaraha-miasa.
Niady mafy izy mba hahazoana antoka fa re hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny feon'i Lesotho. Ny fahamarinana mampalahelo momba ny fifandraisana iraisam-pirenena dia ny fitongilanana hatrany amin'ny fanjakana lehibe kokoa. Tsy hijoro fotsiny ny minisitry antsika ary hanaiky izany ho toy ny fenitra. Izy no mpitarika ny famerenana amin'ny laoniny ny Regional Tourism Organisation of South-Africa (RETOSA), ary niady tamim-pahombiazana tamin'ny fisehoana oligarkia tamin'ny fandrafetana ny fandaharam-potoanan'ny fizahan-tany ao amin'ny faritra. Niady mafy ihany koa izy amin'ny fananganana birao ao amin'ny Sekretariat SADC izay natokana ho an'ny sehatry ny kanto sy ny asa-tanana, ary nilaza fa ity sehatra ity, ao anatin'ny toekarena mpamorona manerantany, dia nahita fitomboana tsy miova ary naneho fahaizany mamorona rohy matanjaka kokoa miaraka amin'ny sehatry ny fizahantany any amin'ny faritra.
Nisahotaka izy noho ny tsy fisian'ny fitantanana araka ny tokony ho izy sy voarindra ny tontolo iainana ao Lesotho ary maniry mafy ny hahatongavan'ity raharaha ity maika izy, ho laharam-pahamehan'ny governemanta iraisana. Mifanaraka amin'ity vina ity dia nanangana ny iraka napetrany izy hanolotra ny fangatahan'i Lesotho manokana eo alohan'ny Tale Mpanatanteraky ny United Nations Environment Programme (UNEP), hanampy amin'ny fananganana masoivoho fitantanana tontolo iainana, rafitra iray hiantsorohana andraikitra amin'ny fiantohana ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary, ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny famoahana politika sy fomba fanao tsara.
Politika tsy lavorary izy, satria na dia mety hampisara-bazana sy hanavakavaka aza ny politika, dia nataony fahazarana ny manatona ny mpanohitra, ary rahoviana no ilaina izany. Ho hitany fa tsy misy ezaka ny fisakaizana amin'i Keketso Rants'o, avy eo amin'ny Kongresin'ny Demokrasia (LCD) any Lesotho; mangataka mpiara-miasa amin'i LCD hijoro ho minisitry ny fizahan-tany mandritra ny fotoana tsy niasany, na hiara-hipetraka amin'ny mpandimby azy, mpikambana ao amin'ny Kaongresy Demokratika (DC) ary hanome torolàlana am-pahamendrehana, ho ampahan'ny tànana. Ity olona ity izay tsy sahy nimenomenona nandritra ny fotoam-pialantsasatry ny Parlemanta fa tsy nahita ny fijeriny ny “laozon'i Qoo” tao amin'ny parlemanta. Fohy izy, fa tsy tia ady.
Tsara fanahy sy tia vola ny minisitra anay. Tsy tadidiko ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviany sy ny fiaraha-monina nokarakarainy; mety ho havana marary, mpikambana sahirana eo amin'ny fiarahamonina mitady akanjo, sakafo na fialofana, mpikambana ao amin'ny fety, sekoly ambanivohitra, na fiangonana mila izany. Nahita lalan-kely foana izy hanelanelanana ho azy ireo. Rehefa maty ny mpiasa iray dia izy no voalohany tonga tany an-trano nanao fiaraha-miory, na raha lavitra izy, dia tsy hisalasala izy hanao telefaona an-telefaona, ary hiala tsiny raha tsy teo ny tenany. Rehefa nampahafantatra azy ny ekipan'ny Tranombokim-pirenentsika momba ny fikasana hanome “tranona finday” ho an'ny fonjan'i Maseru Central, hampiasaina ho efitrano fianianan'ny voafonja, dia faly izy ary nanome toromarika azy hoe: "Omeo boky sy fitaovana koa izy ireo."
Nanana hatsikana lehibe ny lehibinay ary nanana fahaizana nihomehy mafy tany amin'ny faravodilanitra izy. Rehefa tonga nanampy azy aho handamina ny faktiora amin'ny hotely be loatra ao Vienna, Austria, dia nivazivazy izy fa hitako fa efa nanasa lovia ao an-dakozia hotely izy, toy ny fanonerana, hoy izy: "Eto dia manome anao vola na dia sachet iray siramamy aza ianao." Imbetsaka izy no nitantara ny nanesorana azy tsy ara-drariny tao amin'ny Board of the Post Bank, rehefa hitany fa niditra ho mpikambana ao amin'ny mpanohitra ABC izy. Miorina manodidina ity Fivorian'ny Birao manokana ity ny tantara izay nanadinoany nametraka ny findainy mangina. Nandritra ny fizotrany dia naneno ny findainy, ary indrisy fa ho azy, tao an-trano feno mpanohana LCD, ny feony dia hira fiderana an'ny ABC, izay nipaoka, nandrisika an'i Thabane handray ny governemanta Mosisili! Nangina ny trano raha naninjitra ny tànany tamim-pahakiviana izy mba hampanginana ny telefaona andriamanitra. Ny ampitson'io dia nahazo taratasy fandroahana avy amin'ny Birao izy. Ny fihetsiny mahazatra; noraisiny ilay taratasy, nojereny, nihomehezany hatrany Hololo izay hisoratany anarana mba hijoro amin'ny maha kandidà ABC amin'ny fifidianana iray ao amin'io faritra io. Ny ambiny, hoy izy ireo, dia tantara.
Malahelo azy nandritra ny fotoana kelikely isika noho ny tsy fahasalamana, ary ankehitriny ny fahafatesany, fa ny vokany mahagaga amin'ny fiainan'ny maro amintsika dia haharitra mandrakizay. Na dia malahelo aza isika amin'ny fandalovany, dia mahazo hery avy ao amin'ny Baiboly Masina isika (Apokalipsy 21: 4) fa, “… Hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitomaniana, ary tsy hisy fanaintainana intsony; fa efa lasa ny zavatra taloha. ” Raisinay ho marina ireo teny ireo ary ampiononina izahay fa tsy ao anatin'ny fanaintainana sy any an-trano soa aman-tsara miaraka amin'ny vadiny any an-danitra izy izao.
Iza ny chef mpanatanteraka vaovao ao amin'ny WESTIN Resort and Spa Langkawi?
Konferansa Chandigarh: mila fampiroboroboana ny fizahantany i India